Windows 10 ngarava dzine akawanda-mutsara-turu maturusi ekukubatsira iwe kugadzirisa masisitimu masisitimu uye kugadzirisa nyaya, uye mugwaro iri, tinokuratidza mashandisiro aungaita masere acho.
Windows 10 zvinoita kuti zvive nyore kubatana kunetiweki uye internet uchishandisa wired kana wireless kubatana. Nekudaro, dzimwe nguva, iwe ungangoda kugadzirisa marongero nemaoko kana kunetsa matambudziko ekubatanidza, uye apa ndipo apo akawanda akavakirwa-mukati-yekuraira-mutsara maturusi anogona kuuya anobatsira.
Kunyangwe iri nyaya, Windows 10 ingangove uine Command Prompt chishandiso chinogona kukubatsira kugadzirisa matambudziko akajairika. Semuyenzaniso, ipconfig uye ping ari pakati pezvakakosha zvishandiso zvekuona maratidziro enetiweki uye nekugadzirisa matambudziko ekubatanidza. Kana iwe uri kugadzirisa dambudziko remugwagwa, iyo nzira rairo rinogona kuratidza tafura yazvino yekufambisa kuti uongorore uye uone zvine chekuita nenyaya, uye ne nslookup chishandiso, unogona kuongorora matambudziko eDNS.
Iwe zvakare une maturusi akaita rudimbwa kugadzirisa matambudziko ekuchinja uye kutsvaga iyo MAC kero kubva kukero ye IP. Iyo netstat raira-mutsara chishandiso chinokutendera iwe kuti uone huwandu hwehukama hwese Uye iwe unogona kushandisa iyo neth chishandiso chekuratidza uye nekushandura akawanda maficha enetiweki kumisikidzwa, sekutarisa iko kurongeka, kugadzirisa marongero, kugadzirisa Wi-Fi uye Ethernet marongero, kugonesa kana kuremadza iyo firewall, uye zvimwe zvakawanda.
Muizvi Windows 10 tungamirira, isu tichaonesa zvisere Command Command zvishandiso izvo zvinofanirwa kukubatsira iwe kugadzirisa uye kunetsa matambudziko enetiweki pane yako kifaa uye mhiri kwenetiweki.
On Windows 10, ipconfig (Internet Protocol yekumisikidza) iri pakati peyakajairika network yekushandisa iyo inokutendera kuti ubvunze uye kuratidza yazvino TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) network kugadzirisa. Iwo wekurayira unosanganisirawo sarudzo dzekuita dzakasiyana zviito, sekuzorodza Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) uye Domain Name System (DNS) marongero.
Ratidza kugadziridzwa kwenetiweki
Kuti utange ne ipconfig, shandisa matanho aya:
Tsvaga Raira Prompt, tinya kurudyi mhedzisiro, uye sarudza iyo Mhanya semutungamiri kuita.
Nyora unotevera kuraira kuti uone chidimbu cheTCP / IP network kumisikidzwa uye pinda pinda:ipconfig
Kurumidza tambo: Mu Command Prompt, unogona kushandisa iyo cls raira kujekesa iyo skrini mushure mekunge iwe usisiri kuda iyo ruzivo kuti uenderere mberi nekumhanya mirairo pasina kuwanda.
Nyora unotevera kuraira kuti utarise ese TCP / IP network kumisikidzwa uye pinda pinda:ipconfig /all
Ukangopedza iwo matanho, iwe unenge uine tariso yePC yakazara TCP / IP kumisikidza.
Zorodza maratidziro enetiweki
Kuti usunungure nekuvandudza maratidziro enetiweki ne Command Command, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kuti ubvise iyo yazvino network kumisikidza uye pinda pinda:ipconfig /release
Tora iyi inotevera kuraira kuti ugadzirise zvakare maratidziro ekugadziriswa uye pinda pinda:ipconfig /renew
Mushure mekupedza nhanho, wekutanga kuraira uchajekesa gadziriso yazvino, uye wechipiri rairo inotora marongero matsva kubva kuseva yeDHCP kugadzirisa nyaya dzekubatanidza. Kana zvigadziriso zvine simba zvisina kupera muserura, zvakajairika kuona iyo imwechete IP kero inogadzirisazve pachigadzirwa.
Zorodza DNS marongero
Kuti ubvise uye uvakezve ikozvino DNS cache zvinyorwa mukati Windows 10, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kujekesa iyo DNS system cache pane chishandiso uye dzvanya pinda:ipconfig /fludns
Ukangopedza iwo matanho, zvinyorwa zvakachengetwa muDNS cache ye Windows 10 ichadzimwa uye inozorodzwa. Kazhinji, uyu murairo unouya unobatsira kana iwe usingakwanise kubatanidza kune imwe komputa kana webhusaiti uchishandisa iyo inomiririra kana zita rezita nekuda kweruzivo rwechinyakare mune cache yemuno.
Ping ndechimwe chakakosha networking chishandiso nekuti inokutendera kuti utumire ICMP (Internet Control Message Protocol) echo yekukumbira mameseji kuyedza IP kubatana nemamwe majaira, ingave iri imwe komputa munetiweki kana internet sevhisi.
Kwayedza mudziyo wekubatanidza
Kuti uedze kubatanidza netiweki nemutemo weping, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kutumira ICMP echo zvikumbiro kuyedza kubatanidza uye pinda pinda:ping IP-OR-DOMAIN
Mukuraira, chinja IP-OR-DOMAIN iine chaiyo IP kero kana zita renzvimbo yekombuta kana sevhisi yaunoda kuyedza.
Semuenzaniso, uyu murairo unoedza kutaurirana pakati pechigadzirwa chemunharaunda uye router:
Kurumidza tambo: Kana iwe ukashandisa iyo -a sarudzo (semuenzaniso, ping -a 10.1.4.1), iwo murairo uchagadzirisawo kero kune zita remubati.
(Inesarudzo) Nyora unotevera kuraira kuyedza yemuno makomputa network network uye tinya pinda:ping 127.0.0.1
Nhamba yakakurumidza: Iyo 127.0.0.1 kero inozivikanwa, uye inonzi seye loopback kero. Paunomhanyisa iwo kuraira, kana iwe ukawana mhinduro, zvinoreva kuti network yekunamatira irimo Windows 10 inomuka uye iri kumhanya. Izvi zvakafanana nekupimha chishandiso uchishandisa kero yaro yenetiweki.
Paunenge iwe wapedza nhanho, kana ukagamuchira ina dzakabudirira echo mhinduro kubva kwairi kuenda, zvinoreva kuti chishandiso chinogona kutaura neiri kure inomiririra. Kana nguva yekukumbira ikabuda, saka pane dambudziko rinogona kukonzerwa nezvikonzero zvakawanda.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingoita nezvinetso zvekubatanidza, tanga kupinza komputa yemuno kuti uve nechokwadi chekuti network stack iri kushanda Wobva waedza chinongedzo kune iyo router kuti uone kuti nyaya yacho haisi mune yemuno network. Wobva waedza kubaya webhusaiti kuti uone kana paine dambudziko neinternet kubatana kana kure kure inomiririra.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti kana mudziyo uri kure kana sevhisi ichivhara iyo ICMP protocol, iyo ping yekuraira ichagara ichimira.
Ongorora kurasika kwepaketi chiitiko
Iyo ping yekuraira inosanganisira dzinoverengeka sarudzo dzaunogona kuwana ne ping /? raira, uye imwe yesarudzo idzi kugona kumisikidza iyo nguva yaunoda kumhanyisa chishandiso, icho chinogona kuuya chinobatsira kuongorora packet yakarasika kana iwe uchinetseka matambudziko ekubatanidza.
Kuti umhanye iwo mutemo weping kwenguva yakati, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kuti urambe uchingobata kusvikira wamira uye pinda pinda:ping IP-OR-DOMAIN -t
Semuenzaniso, uyu murairo unoedza kutaurirana pakati pechigadzirwa chemunharaunda uye router kwemasekondi makumi matanhatu:
Shandisa Kudzora + C. keyboard pfupi yekumisa ping.
Mushure mekupedza nhanho, iwe unozogona kuona zvakabudirira uye zvakarasika zvikumbiro izvo zvinogona kukupa iwe chiratidzo chekuti ungaenderera sei kugadzirisa matambudziko nekugadzirisa chinetso chekubatanidza. Munetiweki yemuno, maneja anowanzo shandisa iyo ping yekuraira kuti uone kana sevhisi ikadzika pasi nekukurumidza. Zvakare, chishandiso chinogona kushandiswa senzira yekukurumidza yekuziva kana sevha yakwira uye ichimhanya zvakare kana uchitangazve sevha kure.
Windows 10 zvinosanganisirawo tracer (Trace Route), chishandiso chekuongorora nzira yemambure kuenda kune imwe nzvimbo uchishandisa akateedzana eICMP echo zvikumbiro. Nekudaro, kusiyana nemutemo weping, chikumbiro chega chega chinosanganisira kukosha kweTTL (Nguva Yekurarama) iyo inowedzera neimwe nguva, ichibvumira kuratidza runyorwa rwenzira iyo zvikumbiro zvakatora uye nekureba.
Kuti utore nzira yekuenda kune yekuenda ne Command Prompt, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kuti unzwisise nzira yakatorwa kuenda uye pinda pinda:tracert IP-OR-DOMAIN
Mukuraira, chinja IP-OR-DOMAIN ine chaiyo IP kero kana zita rezita rekuenda kwaunoda kunetsa.
Semuenzaniso, uyu murairo unokutendera iwe kuti utarise nzira iyo mapakeji ari kutora kuenda kuGoogle.com:
(Inesarudzo) Nyora unotevera kuraira kugadzirisa iyo hop kuverenga kune kwairi kuenda uye pinda pinda:tracert -h HOP-COUNT IP-OR-DOMAIN
Mukuraira, chinja IP-OR-DOMAIN ine chaiyo IP kero kana zita rezita rekuenda kwaunoda kunetsa uye HOP-COUNT yehuwandu hops iwe hwaunoda kutsvaga.
Semuenzaniso, uyu murairo unoisa muganho wemashanu hops (node) kunzvimbo yekuenda:
Ukangopedza nhanho, iwe uchazoziva kana kwaunosvika kuchisvikika kana kana paine dambudziko renetiwekii munzira.
Kufanana nechokushandisa ping, tracert inosanganisira akati wandei sarudzo, dzaunogona kuona ne tracert /? command.
The nslookup (Name Server Lookup) chishandiso chinogona kuratidza zvakakosha ruzivo rwekugadzirisa matambudziko uye kugadzirisa nyaya dzine chekuita neDNS. Chishandiso chinosanganisira dyidzana uye isiri-yekudyidzana maitiro. Nekudaro, iwe unenge uchishandisa iyo isiri-yekudyidzana modhi kazhinji pane kwete, izvo zvinongoreva kuti iwe uchanyora izere rairo kuti uwane iyo ruzivo iwe rwaunoda.
Iwe unogona kushandisa uyu kuraira kuratidza iyo yakasarudzika DNS zita nekero yeiyo yemuno kifaa, sarudza iyo domain zita re IP kero kana mazita ezita maseva kune yakatarwa node.
Kuti utange ne nslookup on Windows 10, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kuti utarise kumusoro kwenzvimbo DNS zita uye kero uye tinya pinda:nslookup
Nhamba yakakurumidza: Uyu murairo unoitikawo kuvhura iyo nslookup yekudyidzana modhi
Simbisa iyo yazvino DNS ruzivo.
Nyora unotevera kuraira kuti ubude iyo yekudyidzana modhi uye tinya pinda:exit
Nyora unotevera kuraira kuti uone zita nekero yeimwe server uye tinya pinda:nslookup IP-ADDRESS
Mukuraira, chinja iyo IP-Kero nekero yechinhu chiri kure.
Semuenzaniso, uyu murairo unotarisa kumusoro IP kero 172.217.165.142 kero:
Tora iyi inotevera kuraira kuti uone kero yeiyo chaiyo server uye tinya pinda:nslookup DOMAIN-NAME
Mukuraira, chinja iyo DOMAIN-ZITA nekero yechinhu chiri kure.
Semuenzaniso, uyu murairo unotarisa kumusoro IP kero Google.com kero:
Mushure mekupedza nhanho, zvinoenderana nemurairo, iwe unozoziva kana chishandiso ichi iine DNS resolutioner uye iyo IP kero kana domeini uye vise zvinowirirana neiyo kure inomiririra.
The netstat (Network Statistics) chishandiso chinoratidza manhamba ehukama hwese. Iyo inokutendera iwe kuti unzwisise yakavhurika uye yakabatana chiteshi kuti utarise uye kugadzirisa matambudziko enetiweki e Windows 10 uye maapp.
Paunenge uchishandisa netstat chishandiso, unogona kunyora anoshanda eneti kubatana uye ekuteerera madoko. Unogona kuona network adapter uye protocols manhamba. Unogona kuratidza tafura yezvino yekufambisa uye nezvimwe zvakawanda.
Kuti utange netstat, shandisa matanho aya:
Tora iyi inotevera kuraira kuratidza ese anoshanda TCP kubatana uye tinya pinda:netstat
(Inesarudzo) Nyora unotevera kuraira kuratidza inoshanda kubatana inoratidza inhamba IP kero uye chiteshi nhamba pane kuyedza kuona mazita uye pinda pinda:netstat -n
(Inesarudzo) Nyora unotevera kuraira kuti uvandudze ruzivo pane imwe nguva uye pinda pinda:netstat -n INTERVAL
Mune iwo wekuraira, ita shuwa kutsiva INTERVAL yeiyo nhamba (mumasekondi) iwe yaunoda kuratidzazve ruzivo.
Uyu muenzaniso unozorodza iwo mutemo uri mubvunzo mumasekondi mashanu ega ega:
Nhamba yakakurumidza: Paunenge uchishandisa iyo yenguva paramende, unogona kumisa rairo uchishandisa iyo Ctrl + C keyboard ipfupi muoni.
Paunenge iwe uchimhanyisa iwo kuraira, iyo inodzosera runyorwa rwese anoshanda kubatana mumakoramu mana, kusanganisira:
Proto: Inoratidza kubatana kweprotocol, inosanganisira TCP kana UDP.
Yemunharaunda Kero: Inotaridza kero yeIP yedhijitari inoteverwa ne semicolon ine nhamba yechiteshi chekubatana. Iyo mbiri-semicolon mukati mabhureki inoratidza iyo yemuno IPv6 kero. Iyo "0.0.0.0" kero zvakare inoreva kukero yemuno
Kero Yekunze: Inotaridza iyo iri kure yekomputa IP (kana FQDN) kero ine chiteshi nhamba mushure me semicolon port zita (semuenzaniso, https, http, microsoft-ds, wsd).
State: Inoratidza kana kubatana kuri kuita (kwakasimbiswa), kana chiteshi chakavharwa (time_wait), uye chirongwa chisina kuvhara chiteshi (close_wait). Zvimwe zvinzvimbo zviripo zvinosanganisira, zvakavharwa, fin_wait_1, fin_wait_2, yekupedzisira_ack, teerera, syn_received, syn_send, uye timed_wait.
Windows 10 inochengeta iyo rudimbwa (Kero Resolution Protocol) tafura, iyo inochengetera IP kuMedia Access Control (MAC) zvinyorwa zvakagadziriswa nehurongwa. Iyo arp chishandiso inoita kuti iwe utarise iyo tafura yose, shandura zvinyorwa, uye uishandise kuona kure kure komputa kero yeMAC.
Kazhinji, haufanire kunetseka nezveMAC kero, asi pane zvinoitika apo ruzivo urwu rwunogona kuuya zvinobatsira. Semuenzaniso, kana matambudziko emambure achinetsa pa dhata yekubatanidza dhata (switching), kana kana uchirambidza kuwana kana kusefa zvemukati kuburikidza netiweki yezvimwe zvigadzirwa.
Kuti utange ne arp on Windows 10, shandisa matanho aya:
Tora iyi inotevera kuraira kuti utarise yazvino arp tafura cache pa Windows 10 uye tigoshingairira pinda:`arp -a'
Nyora unotevera kuraira kuti uone iyo MAC kero yechinhu chiri kure dhizaini pinda:arp -a IP
Mune iwo murairo, ita shuwa kutsiva IP kune iyo kero yekuenda.
Semuenzaniso, uyu murairo unoratidzira chaiyo kero yeiyo 10.1.4.113 kuenda:
Simbisa iyo MAC (yepanyama) kero yeiyo kure kifaa.
Mushure mekupedza nhanho, iwe unozokwanisa kutarisa iyo yose arp tafura uye MAC kero yeiyo chaiyo IP kero.
Kana iwe uchida kuziva dzese sarudzo dziripo, shandisa iyo arp /? raira kunyora zvese zvingasarudzwa netsananguro dzinoenderana.
The nzira chishandiso chinoratidza tafura yekufambisa iyo inobvumidza Windows 10 kuti unzwisise network uye kutaurirana nemamwe madhivhisi uye masevhisi. Chishandiso chinopawo dzimwe sarudzo dzekugadzirisa nekujekesa tafura pazvinenge zvichidikanwa.
Kunge arp chishandiso, iwe kazhinji haufanire kunetseka pamusoro petafura tafura, asi yekuraira-mutsara chishandiso ichauya inobatsira kana kugadzirisa matambudziko ane hukama.
Kuti utarise kana kuburitsa tafura yekufambisa inowanikwa pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kuti uone iyo yekufambisa tafura inozivikanwa kune Windows 10 uye tigoshingairira pinda:route print
Simbisa iyo yekufambisa tafura ruzivo.
(Inesarudzo) Nyora unotevera kuraira kuti ubvise iyo yekufambisa tafura uye pinda pinda:route -f
Nhamba yakakurumidza: Paunenge uchimhanya uyu wekuraira, chishandiso chinorasikirwa netiweki yekubatana sezvo sisitimu isisanzwisise netopiki topology. Mushure mekumhanya kuraira, tangazve muchina kubvumidza iyo network yekubheja kuti ivakezve nzira yekufambisa. Kazhinji, haufanire kuchenesa tafura kunze kwekunge wagadzirisa zvimwe zvakapinda uye iwe unofanirwa kuseta tafura.
Paunenge iwe wapedza iwo matanho, iwe unonzwisisa iyo yekufambisa tafura uye maitiro ekujekesa iwo ruzivo.
Munogona kushandisa route /? raira kuti uone rondedzero yesarudzo dziripo, kusanganisira sarudzo dzekushandura mametwork enetiweki, tsanangura gedhi, wedzera nzira nyowani, nezvimwe zvakawanda. Zvisinei, kazhinji hazvikurudzirwi kuti ugadzirise marongero aya kunze kwekunge iwe uchinzwisisa mashandiro anoita network
On Windows 10, neth (Network Shell) inhaka yekuraira-mutsara chishandiso icho chinokutendera iwe kuratidza uye nekushandura chero chero network network. Semuenzaniso, unogona kushandisa chishandiso kuona ikozvino network kumisikidzwa, gadzirisa kubatana kwewaya, gadziridza iyo network stack kugadzirisa matambudziko akajairika, kugonesa kana kudzima firewall, uye nezvimwe zvakawanda.
Kuti utange netsh yekuraira-mutsara chishandiso, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kuti uone rondedzero yemirairo inowanikwa (mamiriro) uye tinya pinda:netsh /?
Nyora unotevera kuraira kuti uone rondedzero yeinowanikwa subcommands (subcontexts) yesarudzo yakasarudzika uye pinda pinda:netsh CONTEXT-COMMAND
Mune wekuraira, chinja CONTEXT-COMMAND yemirairo iyo inosanganisira zvimwe zvekuwedzera sarudzo.
Semuenzaniso, uyu murairo unoratidza iwo mairairo anowanikwa ekugadzirisa firewall ne netsh:
Ukangopedza iwo matanho, iwe unozoziva nzira yekufamba netsh mamiriro uye subcontexts raira yekugadzirisa maratidziro enetiweki.
Dzorerazve system network stack
Kugadzirisazve netiweki yekugadzirisa matambudziko akajairika ekubatanidza, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kumutsazve winsock stack uye pinda pinda:netsh winsock reset
Tangazve kombiyuta yako.
Mushure mekupedza nhanho, iyo winsock yekumisikidza ichagadzirisa zvakare, netariro kugadzirisa matambudziko ekubatanidza kunetiweki neinternet.
Export uye kupinza samambure kumisikidzwa
Kuendesa kunze maratidziro ekugadziriswa netsh pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kuburitsa ikozvino kumisikidzwa kweese network network adapters uye pinda pinda:netsh -c interface dump>PATHTOEXPORTED.txt
Mukuraira, chinja iyo PATHTOEXPORTED.txt ine nzira uye zita refaira rekuchengetedza iyo gadziriso.
Semuenzaniso, unotevera kuraira unotumira kunze masetingi kune netshconfig.txt faira:
Paunenge iwe wapedza iwo matanho, iwe unogona kuvhura iyo faira nechero mameseji edhita kuti uone iyo inotumirwa kunze kumisikidzwa.
Tumira kunze kwekugadziriswa
Kuti upinze maratidziro ekugadziriswa kwenetiweki ne netsh, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kuti uunze maratidziro ekugadziriswa uye pinda pinda:netsh -c interface dump>PATHTOIMPORTED.txt
Mukuraira, chinja iyo PATHTOEXPORTED.txt ine nzira uye zita refaira raunoda neyakagadziriswa kunze.
Semuenzaniso, unotevera rairo inopinza marongero kubva kune netshconfig.txt faira:
Mushure mekupedza nhanho, iyo nyowani networking yekugadziriswa ichaunzwa kunze uye kuiswa kune Windows 10.
Bvumira uye dzima firewall
Kuti uwane iyo Windows 10 firewall ine netsh, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kuti ugone kuita default firewall uye pinda pinda:netsh advfirewall set currentprofile state on
Paunenge wapedza matanho, iyo Windows Defender Firewall inogonesa pane chishandiso.
Kudzima iyo Windows 10 firewall ine netsh, shandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kudzima default firewall uye tinya pinda:netsh advfirewall set currentprofile state off
Paunenge wapedza matanho, iyo Windows Defender Firewall icharemadza pachigadzirwa.
On Windows 10, pane zvishandiso zvakawanda zvaunogona kushandisa kushandura marongero uye kunetsa matambudziko enetiweki uchishandisa Command Prompt, PowerShell, uye graphical application. Zvisinei, mumutungamiri uyu, isu tinongotarisa kukuita kuti utange nemamwe maturusi akajairika anowanikwa mu Command Prompt.
3 Sarudzo dzeDain kunyoresa muna 2020
Best Windows 10 inoraira kuongorora yako Indaneti